Tesvor S4 Warka gadget
Miguel Hernández | | qalabka, General, Reviews
Nadiifiyeyaasha Robot-ku waxay sii ahaanayaan beddel waxtar leh oo sii kordheysa oo wax soo saar leh si ay nooga caawiyaan waqti aan badbaadinno markaan samayno nadiifin maalinle ah. Waad ku mahadsan tahay hababkeeda cusub ee khariidaynta iyo falanqaynta booska waxaan ka faa'iidaysan karnaa sifooyinkeeda si ka wanaagsan sidii hore, waana sababta ay u nool yihiin dhalinyar labaad.
Waxaan falanqeynayaa cusub Tesvor S4, oo ah robot si buuxda u shaqeeya si wax looga qabto bartamaha dhexe oo leh hawlo kala duwan oo wanaagsan oo naga caawin doona inaan nadiifinno si ka sii wanaagsan. Nala joog oo ogow sida uu kan Tesvor S4 u noqon karo beddelka ugu wanaagsan moodooyinka ugu caansan suuqa.
Sida munaasabadaha kale, waxaan go'aansanay inaan la socono falanqayntan qoto dheer oo leh muuqaal kaas oo aanad arki doonin oo kaliya furitaanka dhammaystiran ee Tesvor S4, Waxaan sidoo kale ku tusineynaa habaynteeda iyo hababka nadiifinta muhiimka ah. Haddii, dhanka kale, aad horey u go'aansatey inaad hesho, waad sameyn kartaa iyada oo leh qiimaha ugu fiican iyo bixinta 24 saacadood oo ay la socoto dammaanad laba sano ah oo toos ah Amazon. Hadda waa waqtigii si qoto dheer loo falanqeyn lahaa, ee la soco.
1 Naqshadeynta iyo qalabka dhismaha
3 Nadiifinta iyo codsi u gaar ah
4 Is-maamul iyo khibrad isticmaale
Naqshadeynta iyo qalabka dhismaha
Waxa "aad uga naxay" tan Tesvor S4 waa sida calaamaddu ay ugu suurtagashay in ay isku koobto baakadaha ilaa ugu badnaan, tan waa la qadariyaa, loo isticmaalaa in lagu arko baakado waaweyn, in kasta oo xaqiiqda ah in robot laftiisa uusan ka yarayn kuwa tartanka (ka fog) xirmada si fiican ayaa loo shaqeeyay. Waxa soo socda ee ugu yaabka badan ayaa ah in qaybta sare ay ka samaysan tahay muraayad dhalaalaysa, tani waxay ka caawinaysaa inay u ekaato mid qiimo badan oo wax kasta ka sarreeya waxay fududaysaa nadiifinteeda. ka hortagga xagashada iyo nooc kasta oo soo jiidashada boodhka ama faraha. Inta soo hartay, waxaan leenahay cabbirada iyo qaababka ugu caansan.
Waxaan haynaa qalab lagu qiyaaso 44,8 × 34,8 × 14,8 sentimitir wadarta miisaanka oo si khatar ah ugu dhow 5 kiiloogaraam. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo la tixgelinayo in aynaan ku qasbi doonin in aynu riixno sababtoo ah way iskeed u dhaqaaqdaa, ma jirto wax diidmo ah. Waxaan ku haynaa qaybta dhexe ee sare ee dareeraha LiDAR iyo laba badhamada isku xidhka iyo xidhitaanka. Waxay leedahay hal dhinac deked isku xirka hadda jirta haddii aan rabno inaan sameyno iyada oo aan saldhigga lahayn, iyo sidoo kale badhanka goynta.
Tesvor S4 wuxuu leeyahay laba burush oo dhinac ah, kaas oo gacan ka geysanaya in la qabto oo u guuro wasakhda barta la rabo oo ah burushkeeda dhexe, kiiskan. oo leh nidaamka isku-dhafka ah ee naylon bristles iyo dabcan silikoon bristles si ay u qabtaan wasakhda ugu badan ee ku xiran sagxadda. Tani waxay shaki la'aan u muuqatay mid ka mid ah qodobbada ugu wanaagsan.
300ml oo kayd ah
Dhinaca kale, qaabkani waxa uu abuuraa khariidad meelaha la nadiifinayo oo la mid ah kuwa kale sida Roborock, oo hubanti la mid ah. Sidan, waxay u daryeeli doontaa meelo ka weyn 100 m2 hal baas iyada oo aan loo baahnayn in la tago barta dallacaadda. Sababaha cad dartood, nadiifinta ugu horeysa waxay noqon doontaa xoogaa gaabis ah, laakiin hadda ka dib, adoo isticmaalaya caqligaaga artificial iyo marinnada isdaba jooga ee isla khariidad la mid ah, waxaad wanaajin doontaa agabka si aad u bixiso nadiifin degdeg ah.
Waxaan haysanaa meeshan 2.200 Pa oo nuugista ah, in iyada oo aan la noqon xog xad dhaaf ah oo soo jiidasho leh, ay ku filan tahay nadiifinta maalinlaha ah ee dabaqa caadiga ah, gudaha «celcelis ahaan», wax yar ka hooseeya beddelka Dreame iyo Roborock kuwaas oo leh awoodo ku dhow labanlaab. Dhinaceeda, heerka buuqa ugu badan ee robotku waa 50 db, wax si dhow ula xiriira xaqiiqda ah in awoodda nuugid aysan ahayn tan ugu sareysa suuqa sidoo kale. Si kastaba ha ahaatee, sidaan sheegnay, wax dhib ah kuma helin heerka nadaafadda.
Nadiifinta iyo codsi u gaar ah
Codsiga Tesvor wuxuu ku shaqeeyaa Android iyo iOS labadaba wuxuuna noo ogolaanayaa inaan si fudud u wada shaqayno aaladda raac talaabooyinka xigas:
Riix badhanka "ON" ee dhinaca robotka
Marka ay nalalku shidmaan labada badhamada isku mar taabo 5 ilbiriqsi
Marka summada Wi-Fi-ku shido oo iftiimo, aad abka Tesvor oo taabo qalabka ku dar
Hadda waxay ku waydiin doontaa inaad ku xidho shabakada "Smart Life XXXX", taas oo ah mid u dhiganta qalabka nadiifiyaha ee robotka.
Inta soo hartay tillaabooyinka waxaa si toos ah loo fulin doonaa ama iyadoo la raacayo tilmaamaha shaashadda.
Shan daqiiqo gudahood ayaa lagugu xirayaa. In kasta oo codsigu aanu ahayn mid ka mid ah kuwa ugu dhammaystiran suuqa, waa ku filan tahay, oo ay ku jiraan xulashooyinka soo socda ee la muujiyey:
Qalabaynta qalabka oo leh kontorool fogaanta macmalka ah
Dooro awoodda nadiifinta
U dir qalabka goobta dallacaadda
Nadiifi oo buuxa
Waxaan haysanaa doorashooyin kale oo badan, Sida loo cusboonaysiiyo firmware-ka aaladda, laakiin tan adiga ayaan kuu dhaafnay si aanad wax badan ugu kordhin qaybtan.
Qalabkani waxa uu leeyahay madax-bannaani ku dhawaad ​​120 daqiiqo taas oo ku xidhan summada, laakiin tani waxa ay si cad u dhigantaa awoodaha nuugista oo hooseeya. Xaaladdan oo kale, awoodda "caadiga ah", waxaan helnay waqtiyo qiyaas ah 90 daqiiqo, in ka badan oo ku filan oo ku filan si loo sameeyo nadiifinta caadiga ah. Codsiga, dabcan, wuxuu noqon karaa mid aad u dhammaystiran, wuxuu la mid yahay midka kale ee la iftiimiyay sida SPC oo aan diiradda saarin qalabka ku xiran, tusaale ahaan, waxay tixraacaysaa haanta biyaha iyo sifooyinka kale ee Tesvor. S4 kuma jiraan. Inkasta oo software-ku uu socdo oo hufan, waxaa ka maqan xoogaa koolkoolin ah si uu u noqdo mid ka sii go'an.
Dhankeeda, waxaan helnaa nadiifiyaha vacuum-ka ee robot-ka kaas oo ku dhow 275 euro oo bixiya qaar ka mid ah sifooyinka lagama maarmaanka u ah robots-yadan si ay u noqdaan kuwo gargaar ah oo aan ahayn culeys. Si loo bilaabo, deebaaji caan ah, madax-bannaani wanaagsan iyo in la dhammeeyo nidaamka khariidaynta LiDAR oo aad waxtar u leh kaas oo nadiifinta ku habboon ka dhigaya. In kasta oo qiimuhu uu noqon karo xoogaa cidhiidhi ah, isagoo xiiso u leh dalabyo gaar ah oo ka hooseeya 250, si kastaba ha ahaatee, waxay ku sii jirtaa Amazon qiimaha ku dhow 275 euro si joogto ah, taas oo aan wax xun ahayn dhammaan marka la eego waxqabadka.
Qalab si wanaagsan loo dhammeeyey iyo naqshadeynta
Nidaam khariidad wanaagsan
Qalab dheeri ah iyo baakad wanaagsan
Codsigu wuxuu noqon karaa mid faahfaahsan
Waxooga qaylo ah ayuu sameeyaa
30 ama 40 euro wax ka yar waxay jabinaysaa suuqa
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » Tesvor S4.
Sonos wuxuu ku dhawaaqay waafaqid Amazon Music's Ultra HD iyo Dolby atmos
Huawei Watch GT3 waa daahirinta qaacidada guusha leh [Falanqaynta]